Afaka manampy ve ny Tracker GPS hisambotra ny mpiara-miasa tsy mahatoky? | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ahoana no ahafahanao misambotra mpivady mamitaka amin'ny GPS? Ianao dia afaka mahita izay misy ny fiara na ny toerana nisy azy. Tsy vadinao ve ny nitenenan'izy ireo hoe izy ireo? Ao amin'ny hotely iray ve ny adiresin'ny fiara misy anao? Mitsidika trano mitovy foana ve ianao aorian'ny asa? Raha izany no izy, dia afaka manambaka ny vadinao. Ny fampiasana GPS dia fomba iray mora mora hisambotra kizo. Tsy dia misy ny loza sy ny asa. Tsy mila manaraka azy ireo ianao. Mipetraka amin'ny solosainao fotsiny ianao ary hijery.
Amin'ny tontolon'ny vanim-potoana tonga lafatra, ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy miaina araka ny voadin'ny fanambadiany. Mampalahelo fa tsy izany foana ny zava-nitranga satria tsy mivadika ny mpivady. Mahalana ny olona tsy mivadika. Ahoana no ahafantarana raha tsy mahatoky ianao? Mila mijery akaiky ny telefaona ianao mba ho porofo. Ny teknolojia sy ny fampiharana an-tariby dia ahafahana manara-dalàna ny mpivadika tsy mahatoky tsy misy ny fahalalana. Mikaroka safidy maromaro izahay hanarahana ny vadinao, tsy mandany vola.
Efa tapitra ny vanim-potoana miafina miafina na ireo mpanara-maso tsy miankina; ankehitriny dia afaka mitarika ny fanadihadiana miaraka amin'ny fitaovana manana GPS tracker ianao hitadiavana mpitsikilo.
Fitaovana fitazomana fanamboarana anao: solosaina, telefaona ary zavatra iray misy GPS Tracker na fakantsary!
Rehefa nanoratra ity lahatsoratra ity izahay dia nianatra zavatra betsaka momba ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Eny tokoa, mandritra ny taona vitsivitsy, afaka hitantsika eo am-pelatanan'ny rehetra (noho ny fikarohana amin'ny Internet tsotra) sy amin'ny vidiny rehetra ireo zavatra sy ireo mpanara-maso GPS hitsikilo. Ary inona no nahagaga anay rehefa tsikaritray fa novidiana ireto zavatra ireto…. mitsikilo ny vadiny!
Fomba hahalalana rehefa tsy mivadika ny vadinao
-Fandehanana ny telefaonan'ny vady tsy mahatoky - Nahoana?
Ny fahitana fa tsy mahatoky ny vadinao dia mety ho sarotra satria ilay olona manao ny tsy fivadihana dia tsy dia miaiky loatra. Noho izany, tsy manana afa-tsy famantarana miasa ianao. Ohatra, ny lehilahy manambady dia manova ny fitondran-tenany na ny fanaony andavanandro nefa tsy manome fanazavana sahaza an'ireo fiovana ireo. Mety ho mariky ny tsy fahatokisana na tsy fahazoan-kevitra izany. Indraindray, tsy miantso na mamaly telefaona izy ireo rehefa miantso ianao. Mety hidika izany fa tsy mahatoky izy ireo, na mitondra fiara ary tsy afaka mamaly. Raha miahiahy ny vadinao ianao dia mila manamarina raha mandika ny voadiny izy ireo. Ny safidy tsara indrindra dia ny manara-maso ny findain'ny vady tsy mahatoky hanamafisana fa manana fivadihana izy ireo na tsia. Misy endrika samihafa ny tsy fivadihana, manazava ny toetran'ny lehilahy tsy mahatoky ny manam-pahaizana:
Emotional - Manambatra amin'ny olon-kafa ny vadinao, eny fa na dia manambady anao aza.
Fizika - rehefa mahita olon-kafa izy ireo.
Circumstantial - Ny vadinao dia mihetsika amin'ny fotoana
Mety hizara efitrano aminao ny vadinao ary mbola tsy mahatoky amin'olon-kafa. Noho izany, zava-dehibe ny manara-maso ny findain'ny namanao mba hanangonana karazana fampahalalana samihafa, hahafantarana raha nivadika izy ireo na tsia. Tokony ho fantatrao:
-Inona ny olona itenenanao?
-Ny karazana hafatra nosoratany.
-Ny olona fantatry izy ireo.
-Ireo toerana notsidihiny.
-Ny vola tao amin'ny toerana iray.
Azo atao ve ny mamantatra ny vady tsy marina?
Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fanarahana ilay lehilahy tsy mahatoky, dia misy safidy maromaro ho anao. Ny fomba mahomby dia ny fametrahana fitaovana GPS ao amin'ny fiaran'ny vadinao. GPS dia mamela anao hanaraka ny fihetsiky ny vadinao amin'ny fotoana tena izy. Raha te hahafantatra ny alehan'ny vadinao ianao, amin'ny fotoana sasany amin'ny androny, dia lavorary ny GPS. Azo antoka fa mandaitra ireo fitaovana GPS ary tsy handany vola be ianao. Ireo fitaovana GPS dia tsy ilaina foana satria tsy azonao atao ny miantso fampahalalana sy hafatra an-tsoratra amin'ny finday avo lenta.
Ny fomba tsotra indrindra hanamafisana ny tsy fivadihana dia ny fanarahana ny finday ampiasain'ny vadinao. Fitsikilovana amin'ny telefaona, azo atao ny manamarina hafatra an-tsoratra, antso ary manara-maso ny toerana misy ny Vadinao aza.
Fa ahoana ny fanarahana ny finday vady tsy mahatoky maimaimpoana? Ny fomba iray dia ny fanarahana ny fihetsiky ny vadinao amin'ny alàlan'ny GPS. Ny ankamaroan'ny finday avo lenta dia manana rafitra fanaraha-maso GPS, hahitana hoe aiza ny vadinao. Tsy mila mametraka fitaovana fanarahana amin'ny telefaona ianao. Ny maharatsy ny fianteherana amin'ny GPS dia ny tsy fahafahany manara-maso antso, hafatra, fifandraisana, resaka WhatsApp ary maro hafa. Vahaolana iray hafa ny fametrahana rindranasa fizahana finday, misy fampiharana marobe amin'ny rafitra Android na iOS. Ny fampiharana mpitsikilo dia manome anao fampiantranoana hanarahana ny findain'ny vadinao, ao anatin'izany ny GPS.
Ahoana no hisafidianana ny fitaovana GPS harahina?
Alohan'ny hividiananao fitaovana GPS dia zava-dehibe ny mahafantatra zavatra vitsivitsy. Ho an'ireo fanombohana, tsy mila GPS mahazatra ianao. Ireo karazana rafitra ireo dia navoaka amin'ny fahitalavitra ary hita any amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana. Eny, fitaovana GPS ireto fa tsy ilay karazana tianao. Izy ireo dia tokony hanome torolalana amin'ny mpamily. Tsy mila GPS miaraka amin'ny efijery miorina ianao. Ireo fitaovana ireo dia mitabataba indraindray ary ny efijery mamirapiratra dia afaka misarika ny saina amin'ny fitaovana, na dia afenina azy tsara io. Noho izany, inona ny karazana GPS tianao?
Ny mpivady izay te hisambotra vady mpamitaka, dia tokony handinika ny mpitazotra GPS mampiasa mpandefa. Ny mpampiasa dia mampiasa ireo fitaovana ireo hanara-maso ireo mpamily. Manampy ny mpitantana hamantatra ny toerana misy ny mpamily izy ireo, na eo amin'ny fandaharam-potoana ary na manao ny asany tsara izy ireo. Na dia natao hanara-maso vondrona andian'olona aza ny ankamaroan'ireo fitaovana ireo, dia mahazo alàlana amin'ny ankamaroan'ny rafitra ny fiaran'ny fiara tsirairay.
Manaova fikarohana mahazatra amin'ny Internet hahitanao ireo tracker GPS miafina na tracker GPS. Rehefa mijery sary ianao dia mila fitaovana kely iray. Mila fitaovana tsy misy tariby ianao raha tsy misy efijery lehibe. Ny mainty no loko tsara indrindra. Zahao ny famaritana ny vokatra hahitanao izay azonao. Manafatra rafitra iray miaraka amin'ny topy topy maso. Tsy te hahalala amin'ny alàlan'ny mailaka ianao hoe aiza no misy ny fiaran'ny vadinao. Tianao haseho amin'ny sarintany ny valiny. Mikaroha programa miaraka amin'ny Google Maps satria afaka misafidy sary satelita ianao. Zomy ary zahao ny toerana tena misy ny fiaran'ny vadinao. Io no mamaritra ny trano misy anao.
Ny lakilen'ny fisamborana vady sandoka dia ny fiandrasana. Araka ny fandrindrana GPS vadinao dia ao amin'ny toeram-piantsonan'ny hotely eo an-toerana izy. Aza miampanga azy ho namitaka tamin'ny fahatongavany. Araho ny fihetsik'izy ireo mandritra ny andro na herinandro vitsivitsy. Impiry mitsidika ny hotely izy? Tsy hoe rehefa miala sasatra kely any an-trano ny vadinao rehefa avy miasa dia tsy midika hoe mamitaka izy. Ampiasao ny Tracker GPS miafina hamaritana lamina iray alohan'ny hamelana ireo fiampangana. Rehefa apetraka io lamina io dia miankina aminao ny manapa-kevitra ny amin'izay ho tohiny.
12632 Total Views 2 Views Today